Ururka Dhalinyarada SEDYO Filand Oo Casho Sharaf U Sameeyay Marti Sharaf Ay Kamid Tahay Fanaanada Wayn ee Nimco Dareen Kuwaas Oo Kawarbixiyay Isbadalka DDSI. - Cakaara News
Ururka Dhalinyarada SEDYO Filand Oo Casho Sharaf U Sameeyay Marti Sharaf Ay Kamid Tahay Fanaanada Wayn ee Nimco Dareen Kuwaas Oo Kawarbixiyay Isbadalka DDSI.
Helsinki(CN) Khamiis.Feb.19.2015, ururka dhalinyarada SEDYO Finland ayaa shalay casho sharaf u sameeyay xubno kawarbixiyay xaalada isbadal ee uu deegaanka kutalaabsaday. Xubnahan marti sharafta ah ayaa waxaa kamid ahaa fanaanada wayn ee Nimco Dareen iyo xubno kale oo caan ah.
Casho sharaftan ayaa waxaa kasoo qayb galay gudiga fulinta ee ururka SEDYO Finland, fanaanada caanka ah ee Nimco Dareen iyo xubno kale oo iyaguna dhawaan soo indha indheeyay xaalada isbadal ee deegaanka kajirta. Nimco Dareen ayaa kamida xubnaha xubnaha wakhtiga badan soo arkay xaalada isbadal ee uu deegaanku gaadhay sanadadii u danbaysay.
Fanaanada wayn ee Nimco Dareen ayaa halkaasi kasoo jeedisay khudbad ay kaga faalootay xaalada uu hada deegaanku kusugan yahay iyo marxaladihii hada kahor iyadoo sheegatay in DDSI uu ka hirgalay horumar balaadhan oo si xawli ah u socda taasoo ay cid waliba makhraati katahay.
Xubnihii marti sharafta ayaa halkaasi kasheegay waxyaabihii cajabta galiyay ee ay deegaanka kusoo arkeen kuwaas oo ay kamid ahaayeen xasiloonida iyo sida nabadgaliyadii deegaanka nabad loogu soo dabaalay, wax barashada iyo fursadaheeda balaadhan ee DDSI kajirta, sidoo kale waxaa halkaasi lagu soo bandhigay warbixin maqal-muuqaal ah oo lagu daawaday horumarka dhinaca wadooyinka iyo isgaadhsiinta, taasoo aad u farxad galisay dhamaanba dadkii kasoo qayb galay islamarkaana aad loo soo dhaweeyay.
Intaas kadib waxaa daadihiintii munaasiba lawareegay hawl wadeenada ururka dhalinyarada SEDYO Finland oo munaasiban soo qaban qaabiyay, waxaana hadalo bogaadin ah halkaas kasoo jeediyay gudoomiyaha iyo gudoomiye kuxigeenka ururka dhalinyarada Finland mudane Yusuf Axmed iyo Jamiil Sheekh Maxamed. Waxayna khudbadahani gundhigeedu ahaayeen hanbalyo iyo bogaadin ay ururka dhalinyarada SEDYO FInland u dirayaan X.D.SH.S.I iyo sida hagar la'aanta ah ee uu xisbigu deegaanka wax uga qabtay 5-tii sano ee u danbaysay nabadgaliyada, horumarka iyo maamulka suuban oo ay ugu horayso xidhiidhka dadwaynaha dal iyo dibad.
Gudoomiyaha SEDYO Finland mudane Yusuf Axmed ayaa ugu hanbalyeeyay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo guud ahaanba X.D.SH.S.I sida xoogan ay ugu heelanyihiin dhalinyarada qurbaha oo ay ugu horeeyaan SEDYO , taasoo uu madaxwaynuhu sababteeda leeyahay islamarkaana uu kasbaday. Sidoo kale wuxuu sheegay in ay ka go'antahay sii xoojinta iyo iskuxidhka dhalinyarada dal iyo dibadba islamarkaana u ilaashan lahaayeen horumarka iyo nabadgaliyada deegaankooda.
Dhanka kale waxay dhalinyaradani aad u soo dhaweeyeen go'aamadaii xisbiga ee abid tiro intaas la'eg ama ku dhaw u ogolaaday saamiga kuraasta baarlamanka ee dumarka. Waxayna sheegeen in ay taageero kal iyo laab ah oo dareen wadani iyo danta shacabka xanbaarsan in ay kagarab taaganyihiin markasta XDSHSI ee maanta DDSI halkan gaadhasiiyay taasoo cid waliba makhraati katahay.
Sidoo kale waxay sheegeen dhalinyartani in XDSHSI iyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar in ay boqolkiiba boqol mudan yihiin in mar labaad iyo mar saddexaad iyo marar badanba lasoo doorto maadaama ay wax qabad cad ay keeneen taasoo ay si geesinimo, ka go'naansho iyo aragti shacab leh ay ku kasbadeen isbadalkan taariikhiga ah ee dhinacwalba taabatay Nabadagaliyadii, horumarkii, xidhiidhka dawaynaha iyo maamuulka suuban.
Munaasibadan casho sharafta ah oo warbixino deegaanka kusaabsan lagasoo jeediyay islamarkaana ay kasoo qayb galeen dhalinyaro magac iyo mansanba leh ayaa waxaa hanbalyo iyo bogaadin loo dirayay XDSHSI guulaha uu soo hoyiyay shantii sano ee u danbaysay.
Munaasibadan oo halkudhag looga dhigay "DAYAX NUUR UMA BAAHNO" ayaa kusoo beegantay wakhti uu deegaanka iyo dalkuba diyaar u yahay doorashadii 5aad oo dhacaysa laba bilood iyo maalmo kadib kuna aadan bisha sagaalaad ee ginbood ee tirsiga dalka.